Linus Torvalds akati: hapana munhu, kunyangwe Microsoft, anogona kutora kutonga kweLinux pachavo | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds akati: hapana munhu, kunyangwe Microsoft, anogona kutora kutonga kweLinux pachavo
Microsoft, uyo akamboona iyo Linux kernel segomarara, iye zvino ave mumwe weayo makuru anopa uye inoramba ichitonga nharaunda yeLinux. Nekuda kweizvi, vamwe vakatanga kunetseka zvechokwadikana kuti Microsoft inokwanisa kudzora zvizere Linux. Asi kumusangano weLinux Plumbers 2019, Linus Torvalds akati kwete uye izvo hazvifi zvakaitika.
Munguva yechiitiko ichi, Linus Torvalds nevamwe vanoverengeka veLinux kernel programmed vakabvunza mubvunzo nezvekuti Microsoft inoda kudzora Linux here, asi vakawedzera kuti havana hanya. Sekureva kwaLinus Torvalds, hukama hwacho handizvo zvavaimbove pakati pevanogadzira Microsoft nevashandisi veLinux kernel.
“Zvese izvi zvinopesana neMicrosoft zvaive zvinosetsa dzimwe nguva, asi kwete chaizvo. Nhasi ivo vane hushamwari zvakanyanya. Ini ndinotaura nevanjiniya veMicrosoft kumisangano dzakasiyana siyana, uye ndinonzwa kuti hongu, zvachinja uye kuti mainjiniya ari kufara. Uye ivo vanofara chaizvo kushanda paLinux. Saka ndakaramba zvachose zvese zvinopesana neMicrosoft, "akadaro Torvalds.
Hukama pakati penharaunda yeLinux kernel neMicrosoft hauna kugara wakanyanya kunaka, nekuti pane akati wandei, Microsoft ingadai yakavhara chirongwa ichi kuti chidzivirire shanduko yayo. Muna 2001, Steve Ballmer, aimbova CEO wekambani yeRedmond, akange atotaura kuti Linux kernel yakanga yakaita segomarara.
"Manyorerwo akaitwa rezenisi, kana ukashandisa software yakavhurika, unofanirwa kugadzira iyo software yasara yakavhurwa sosi ... Linux kenza yehungwaru yezvinhu inotarisana nezvose zvinobata," akadaro.
Nekudaro, mumakore achangopfuura, Microsoft yanga ichibatikana kwazvo munharaunda open source, kunyanya paLinux kernel. Izvi zvakamutendera kuti ape mamwe marudzi esoftware kune vatengi vake uyezve kuti abatanidze, munguva pfupi yapfuura, Linux kernel kuWindows inozivikanwa seWSL (Windows Subsystem yeLinux). Asi kune vamwe, zano raMicrosoft nderekuwedzera Linux kuti pakupedzisira izvidzore.
Torvalds inovimbisa kuti chinangwa chikuru cheMicrosoft neLinux ipuratifomu yeAzure.
Nhasi, maererano nezvakataurwa, Linux inonyanya kushandiswa muMicrosoft's cloud service, Microsoft Azure Cloud.
Muna Chikunguru, Sasha Levin, mugadziri weLinux kernel anoshanda kuMicrosoft, muchikumbiro chekujoinha runyorwa rwekunyorerwa tsamba yakazvimiririra yakachengetedzwa kuLinux nenzvimbo dzakavhurika sosi, akacherekedza kuti "kushandisa Linux mugore raMicrosoft rakapfuura Windows 'kunyangwe zvisingaite' t inopa nhamba dzakarurama. Iyo kambani zvakare ine Azure Sphere OS, sisitimu iyo musimboti wayo wakavakirwa paLinux.
Microsoft ine dzimwe pfungwa here kana kuti ichabhadharisa zvakare kuyedza kudzora Linux? Kune izvo, Torvalds akapindura kuti haafunge kuti Microsoft iri kuronga kuzviita.
"Handifunge kuti ichokwadi." Ndiri kureva, kuchave nekukakavadzana. Asi ichokwadi kune chero kambani inouya neLinux; vane zvinangwa zvavo, "akadaro Torvalds. Uye ivo vanoda kuita zvinhu nenzira yavo nekuti vane chikonzero chekuzviita. Sekureva kwake, chakanangwa neMicrosoft neLinux ipuratifomu yeAzure.
"Microsoft inotarisa kuAzure uye kuita chero zvazvinotora kuti Linux ivashande zvakanaka," akawedzera Kwaari, maitiro aya akajairika, nekuti zvinoreva kuti ivo vari kungotanga kubva munharaunda.
Mumakore achangopfuura, Microsoft yakaisa mari kwazvo munharaunda yeLinux uye akatokumbira kujoina "Linux yekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekutaurirana rondedzero" kuti vaziviswe nezvezvinhu zvisati zvave pachena.
Iwe wakasarudzawo kuvimba neLinux-based Android Linux operating system kudzokera kumusika we smartphone, wasiya muna 2017 kufa kweiyo inoshanda foni system, Windows 10 Nhare. Microsoft ikozvino inoita kunge inochengetera Windows yePc chete.
Zvisinei, Torvalds nevamwe vake havana hanya kuti Linux inodzorwa neMicrosoft. Izvo zvinopesana. Iyo Linux kernel ikozvino iripo mukambani yega yega tech, kusanganisira Microsoft. Izvi zvinongosimbisa kugona kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds akati: hapana munhu, kunyangwe Microsoft, anogona kutora kutonga kweLinux pachavo
Judhasi akatumira Kristu pamuchinjikwa, achimukwazisa "nekutsvoda nyoro." Ivo vanogamuchira "kutsvoda nyoro" kubva kuna M $ uye atove M $ ndicho chinhu chikuru chiripo ("Nhasi ivo vane hushamwari"): rolleyes:
Zvisinei, zviri pachena kuti kuve wakangwara uye benzi panguva imwe chete zvinokwanisika.
Iri ndiro dambudziko neMicrosoft nderekuti nguva pfupi yadarika kwaunodya shiti yakapusa Nhamba dzenhare, maseva, kinect, chaiyo chaiyo, github windows10 pachayo. Zvese zvaunogadzira zvinoparadza kana kuzvisiya!
Chitsvuku ngowani chinhu chainzwisa tsitsi ngatijekesei yekupedzisira bastion yeMicrosoft ndiyo nyika yeoffice otomatiki nemitambo asi ipa Google nguva yekuidya nemastadia kana vangotengesa mitambo pc iri muvolkan chinhu chacho chaizochinja mune chaicho chaicho chakadya facebook uye vharafu. Inguva yakareba zvakadii Microsoft kuronga kurarama pasina kuburitsa kuenderana isati yafa.
Akadaro muzivi, "ita semvura shamwari yangu"
Leonard Pisano akadaro
Penguin yakapwanya hwindo?
Pindura kuna Leonardo Pisano
Ubuntu Bata OTA-11 inowanikwa nekhibhodi yakavandudzwa
Nyowani muFirefox Husiku: Iyo Inotyisa Bhawa inokura uye nyowani Kiosk Mode